lahatsoratra 92 754 amin’ny teny malagasy
Isan-taona dia manonta boky kely misy ny alimanaka malagasy ny mpanandro maro na ny mpamokatra mpiara-miasa amin'izy ireo. Nanomboka ny volana Aprily 2019 dia efa misy ihany koa, ho an'ireo mpampiasa ny finday Android, ny haitao natokana hijerena ny alimanaka sy tetiandro malagasy araka ny fomba fanisàna atao hoe "isa lava".
Zoma, 1 Mey 2020
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Zoma 1 Mey ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.
1 2 Razafintsalama P.A., Ny finoana sy ny fomba malagasy, p.51.